Özhaseki: "Xulashada Guryaha ee Nidaamka Tareenka waa qayb muhiim ah oo warshadaha ah" | RayHaber | raillynews
[13 / 02 / 2020] TÜVASAŞ waxay soo saari doontaa Tareenka Qaranka ee Korantada Korantada oo leh tas-hiilaad guri	54 Sakarya
[13 / 02 / 2020] Sharaxaadda Tooska ah ee Mashruuca Sümela Teleferik!	61 Trabzon
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraÖzhaseki: Doorashad Qodobbada loo yaqaan "Industresional" ee Soomaliya ee Doorashada Degmadda ee Nidaamka Isgaadhsiinta
Özhaseki: Doorashad Qodobbada loo yaqaan "Industresional" ee Soomaliya ee Doorashada Degmadda ee Nidaamka Isgaadhsiinta
19 / 01 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Nidaamka tareenka ozhaseki ee doorbididda gudaha ayaa ah qayb muhiim ah oo ku saabsan suuqa
Kuxigeenka gudoomiyaha AK Party isla markaana ah murashaxa Duqa Magaalada Ankara Mehmet Ozhaseki, muhiimada wax soo saarka iyo warshadaha, "Haddii aad ku barato wax soo saarka dalka dibadiisa, hadaad dalka ku barto, ma dhihi kartid ereyo aad u wanaagsan oo ku saabsan mustaqbalka wadanka mana dhisi kartid riyooyin waaweyn."
Iyada oo 31 Maarso Doorashooyinka Maxalliga ah ay soo dhowaaneyso, shaqada musharrixiinta ayaa si isdaba joog ah u socota. Gudoomiye kuxigeenka AK Party ahna Duqa Magaalada Ankara Mehmet Özhaseki iyo Duqa Magaalada Altındağ iyo Musharaxa Duqa Magaalada Yenimahalle Veysel Tiryaki ayaa la kulmay warshadaha warshadaha ee Ostim.
Hoolka shirarka OSTIM OSB wuxuu ka dhacay barnaamijka, mudadii hore Gudoomiyaha Barlamaanka Cemil Cicek, AK Party kuxigeenka Necati Cetinkaya iyo gudoomiye kuxigeenka Nationalist Movement Party (MHP) Yasar Yildirim iyo xubno badan oo OSTIM ah ayaa kasoo qeybgalay.
Gudoomiyaha OSTİM OSB Orhan Aydın, oo isagu marti geliyay barnaamijka ayaa kahadlay rajada ay ka qabaan dawladaha hoose daaqada warshadaha wuxuuna ka hadlay shaqooyinka la qabtay iyo wixii aan ilaa hada la qaban.
Isagoo tilmaamay in OSTIM ay door libaax ka qaadatay isbadalka Ankara ee ka socda magaalada caasimada ah ee shaqaalaha warshadaha, ayuu yidhi Ayd saidn, faaliyet Hawshu waxay ka bilaabatay halkan 1980 sano oo meeshii aan ugu magac daray wax soo saar warshadeedka waa OSTİM. Markii dambe, OIZs waxaa laga sameeyay Ankara. Ilaaladooda sidoo kale; OSTIM waa barta bilowga iyo cinwaanka boqolkiiba boqol ee 80 ee shirkadaha kale ee OIZs ee Ankara. Cinwaannadooda ayaa wali ku sii socda halkan. Dabcan waxaan leenahay sii wadi karo xiriirka degmooyinka. OIZs waxay leeyihiin cunaqabatayn u gaar ah shuruucdooda awgeed, laakiin looma tixgelin karo inay ka duwan yihiin degmooyinkayada. Wax badan oo aan isla qaban karno dhinacba dhinac ayaan ka qaban karnaa.
Magaalada OSTIM; Isagoo ku nuuxnuuxsaday in wadooyinka iyo kaabayaashu ay adeegsanayaan magaalada oo dhan maadaama ayan ahayn OIZ madax banaan, Duqa Magaalada Aydin ayaa yidhi, ama waxaan kale oo weydiisanaynaa taageero joogto ah iyo caawimaad deg deg ah oo ku saabsan dayactirka iyo hagaajinta. Thanks to taageerada joogtada ah iyo tabaruca ee Degmadeena waawey gaar ahaan dhawaantan, inkasta oo ay mararka qaar carqalado kala kulmi karaan. Caadi ahaan, waxaan dooneynaa in tani ay sii socoto waanu sugeynaa waana ku mahadsantahay shaqada aad qabatey
gacan ka geysasho muhiim in industry ee gudaha nidaamka tareenka doorashada
Duqa Magaalada AK Xisbiga Ankara Metropolitan Duqa Magaalada Mehmet Özhaseki OST effortM waa dadaal wada jir ah oo ay indhaha ku hayaan Orhan Aydin, Kayseri, sababtuna tahay adeegsiga wax soo saarka gudaha iyo qaran Ozhaseki ayaa sheegay inay amaaneen.
Aydın wuxuu yiri: olarak Anigoo ah duqa magaalada oo ka dhistay gawaarida taraamka ee Kayseri degmo ahaan iyo qaran ahaanba, waxaan had iyo jeer ku xasuustaa isaga agagaaraha oo aan had iyo jeer maqnaano. Gawaarida metrooga ee ay soo saarto shirkadeena Ankara ayaa hada ka howl gala Kayseri. Tani maahan wax fudud; Aynu qaadanno gawaarida dhulka hoostiisa mara, Kayseri ma ahan munaasabaddu inay shaqeyso. gaariga hoostiisa mara ee Turkey, nidaamka tareenka waa qayb aad u muhiim ah in vernacularization iyo ay la warshadaha ee.
Anatolian Railway Gaadiidka Systems Cluster (Caruus) sida aynu raacaan dhammaan siyaasadaha dalka Turkiga. Waxaan rabnaa waxaanna rajeyneynaa in sheekadaada guusha ee Kayseri in loo wareejiyo Ankara. Ankara Subway; Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa dhismaha labada xarumood ee maxalliga ah, kuwa qaran iyo Ankara dhismaha shirkadda Esenboğa-Ankara. Shirkadahayadu way awoodaan inay tan sameeyaan. Maxaa yeelay shirkadan Ankara sidoo kale; Shirkaddu waxay sidoo kale dhistay Bangkok Subway ee Thailand waxayna ka shaqeysaa Thailand. Waxaan nahay sharaf iyo sharaf. ee Ankara Bozankaya Shirkadeena, Bursa Durmazlar Shirkadeena waxay hadda ka shaqeysaa magaalooyin badan oo gawaarida maxalliga ah iyo kuwa mile. Bursa, Samsun, Kocaeli, Kayseri. Mashruuc aad u fiican ayaa laga sameeyay Malatya oo hadda wuu shaqeynayaa. Waxaan jeclaan lahayn in aan tan u soo qaadno ajendaha loogu talagalay Ankara sidii xalka gaadiidka.
Siyaasadaha wax soo iibsiga ee degmada ayaa muhiim u ah warshadeynta
Siyaasadaha wax iibsiga ee degmooyinkeenna waaweyni iyo degmooyinku aad ayey muhiim ugu yihiin warshadeynta. Waxaa jira labo lejo oo waaweyn oo ka dambeeya horumarka dalalka horumaray. Midkood waa warshadaha difaaca kan kalena waa soo iibsi dowladeed. Laba mowduuc oo muhiim ah horumarka tikniyoolajiyada adduunka. Waxay ii tahay barako in shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa waddaniga ah iyo gaar ahaan shabakadda warshadaha gaashaandhigga ay horumar ku sameeyeen gaar ahaan Ankara waxyaabaha aad ka soo iibsatay iyo mashaariicda ka socda Degmadda Ankara ee Magaaladda.
Wershadaha Difaaca ee Ankara iyo shirkadaha waxay ku duuli karaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cirka oo duulaya Waqooyiga Ciraaq. Waxaan u baahanahay inaan isweyddiinno warshadaha aysan sameyn karin. Waxaan ka hadlayaa mashiinnada aan ka heli karin degmaddeena dhammaan kooxdeena iyo kooxduba; Haddii aad haysato qalabka riyadaada 'ha aqbalin' ha aqbalina.
Gaarigaaga miino ma uga dhigi kartaa? waxay dhihi. Waxaan sidaas samayn kara. Dawlada Hoose iyo Magaalada Yenimahalle waxay dhahaan: Ma jiraan wax aan halkaan laga qaban karin. Nala wadaag baahiyahaaga, waxaan dhahnaa nala samee. ”
Walaasha magaalooyin fursad
Degmooyinka Aydin Magaalo-Weyne waxay qabanqaabisay koorsooyin tababar xirfadeed ah waxay xusuusisay in BELTEK ay tahay qaab dhismeed aad u qiimo badan Aydin, BELTEK waxay dooneysay in lagu horumariyo halka shaqada.
"Museum Warshadaha waxaa la samayn karaa on our ajandaha. Orhan Aydın wuxuu sii watay hadalkiisa isagoo leh: “Dowlada hoose ee Ankara waxay leedahay magaalooyin xero xNUMX ah. Magaalooyinka, shirkadaha waxay u baahan yihiin inay ku jiraan bartamaha tartankan. Waxaa jira wax muhiim ah oo aan dareemayo in cilaaqaadyadan ay yihiin kuwa dhexdhexaad ah. Marka laga hadlayo horumarka dalka, magaalooyinku waa inay bartanka ka galaan tartankan. Magaalooyinka walaalo waa meel muhiim ah oo lagala xiriiro. Waxa aan sameyn karno; Annaga oo ah Ankara, waxaan u baahan nahay inaan abuurno qalab. Ankara, tirada magaalada ka mid ah dalka Turkiga ee macluumaadka. Halkaas waxaa ku yaal dooxada; Hacettepe, Bilkent, METU. Waxaan ubaahanahay inaan tan buuxino.
Ankara degmada Metropolitan ayaa codsiyada aad u fiican. Aynu iyaga ka dhigno xirmo. Kaabayaasha, qaab dhismeedka duulista, muuqaalka dhul si wanaagsan ayaan u sameyneynaa. Hagaag ayaan u wareejin karnaa magaalooyinka kale, dhaqaalo ayaan ka soo saari karnaa. Bulshada, barnaamijyo waxbarasho, gaadiidka, horumarinta.
Waxaan ku leenahay OIZs, shirkado iyo waaxaha ku yaal Ankara. Waxaan heysanaa koox isku xireysa 7. Bartamaha nidaamyada xadiidka waa Ankara. Ankara runtii waxay leedahay kaabayaal aad u qiimo badan. Maxaysan u arkeynin baahiyaha dalal kale oo leh cilmiga deegaanka iyo inaadan ka iibin. Kaliya maaha iibinta. Waxaa laga yaabaa inaan ka helno qaar iyaga. Waxay noqon kartaa barta isku xidhka xiriir dhaqaale oo waara oo midba midka kale ka helo. ”
Iz waxaan la jirnaa aqoonyahanada warshadaha ”
Musharaxa Duqa Magaalada Altındağ iyo Musharaxa Duqa Magaalada AK Party Veysel Tiryaki wuxuu warbixin ka siiyay shaqooyinkiisa iyo mashaariicdiisa Altındağ.
Isagoo carabka ku adkeeyay inay markasta Altındağ leeyihiin ganacsato waawayn iyo yar yarba, ayuu yidhi Tiryaki, iz Waxaan shaqooyinka muhiimka ah ka qaban karnaa Yenimahalle oo aan la leenahay adduunka ganacsiga. ”
Isagoo tilmaamay in Yenimahalle ay tahay xarunta ugu weyn warshadaha iyo wax soo saarka ee Ankara, Tiryaki wuxuu soo jiitay qiimaha ay ku dartay OSTİM gobolka. Wuxuu sheegay inay khibrad u leeyihiin sidii ay Yenimahalle ugu rogi lahaayeen goob ay saxeexday arrimaha caalamiga ah.
Yenimahalle, warshadaha, technology, teknoolajiyadda macluumaadka iyo ganacsiga beeraha, ma aha oo kaliya in Ankara, Turkey ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in ay doonayaan in ay sameeyaan brand ee Veysel Tiryaki, "Waa qaali ah oo soo saarka iyo soo saarta, waxaan by our dhan Xirfado in ay gacan naga dhaqaalaha qaranka taagan." Farriin ah.
"Baarka OSTİM in la qaado meel Turkey"
Yasar Yildirim, Kuxigeenka Gudoomiyaha Xisbiga Wadani iyo Kuxigeenka Ankara ayaa cadeeyay inuu ku faraxsan yahay joogitaanka OSTIM isla markaana uu si joogta ah u booqdo OSTIM.
Yasar Yildirim, Gudoomiyaha OSTIM ee Gudiga Agaasimayaasha Orhan Aydın wuxuu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay kulan kasta, wuxuu yiri: "Markaan u imaado OSTIM, Orhan Aydın Bey, farxad ayaan la duulayaa. Sababta waa, waxaan arki horumarinta dalkayga. OSTİM waa meel-baarka waxaa laga qaadi doonaa dalka Turkiga. Waxaan u nimid inaan aragno sida warshadaha difaaca ay u horumariso iyo sida warshadaha warfaafinta ay u horumariyaan. Marka waxaan u mahadnaqayaa OSTIM aad iyo aad. Ilaahay ha idin barakeeyo dhamaantiin howlaha aad u qabtaan dalkaan.
"Soo saar aad u qaali ah"
Duqa Magaalada AK Party ee Magaalada Magaalo Weyn Mehmet Ozhaseki, wuxuu ka soo jeedaa qoys warshad leh, waana garanayaa dhibaatooyinka warshadaha, ayuu yidhi.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in waxsoosaarka uu muhiim u yahay dalka, Özhaseki ayaa yiri, sa Haddii aadan wax soo saar dalka ka helin, haddii aad ka baratay wax ka iibsashada dibadda, ma sameyn kartid ereyo aad u wanaagsan oo ku saabsan mustaqbalka dalka mana aad ku riyoon kartid riyo weyn. Dalka laftiisa waa inuu soo saaraa waxkasta oo laga bilaabo z iyo z, laga soo bilaabo cirbadda ilaa yarenka, iyo inuu la socdo horumarka. ”
Isagoo tilmaamaya isbeddelada degdega ah ee ku dhaca da'dayaga iyo baahida loo qabo in la waafajiyo tan, siyaasi khibrad leh ayaa yiri, waxaan ku nool nahay da 'da in isbedelku uu dhakhso badan yahay. Waa shaqada ganacsatada waa weyn, gaar ahaan dowladaha, in ay fahmaan oo ay ka gartaan isbeddelka deg degga ah. Haddii aadan fahmin isbeddelka si sax ah, haddii aadan u dejin karin xaaladaada si hagaagsan, waad ka sii dari doontaa kana sii dari doontaa waqtiga. Dareenkan, waxaan joogaa maanta adiga oo ah qof og in OIZ iyo teknoolojiyad kasta ay aad qiimo ugu leedahay qof kasta oo sameeya wax soo saarka.
Özhaseki, siinta muhiimadda ay leedahay dadaalka dadka degaanka iyo heer qaran ee tusaalooyin maal-tareenka ka Kayseri Streetcar muujiyay in erayadan: "Markii aan kici si ay u hirgeliyaan nidaamka tareenka waqtiga, maadada laga bilaabo mashruuca ugu horeeya ee ay dul saarin dhulka hoostiisa ah ee biraha of tiro ka mid ah nidaamka, iyo ulaheeda, dhigay electrification dhow inoo sameeyey waxay ahayd astaan. Mar walba waa nala xukumi jiray. Haddii aan eegno galay indhaha ay ka heleen waayo waxa aad sheegayso. "
Mehmet Özhaseki, xubin ka tirsan ARUS ee Kayseri Tram hindise inta lagu jiro Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri Bozankaya Shirkadda doorbidey taraammada gudaha iyo qaranku waxay soo saareen faa iido qiimo leh. BozankayaGawaarida 2016 tram waxay u dejisay Kayseri gudaha 30.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in dawladaha hoose ay door muhiim ah ka ciyaaraan dhaqaalaha magaalooyinka, ayuu Özhaseki sii raaciyay: “Dawladaha hoose ayaa jidka u xaari kara adduunka ganacsiga haddii ay rabaan. Degmooyinka, dawladaha hoose, magaaladu waxay iska leedahay inta ay leegtahay wax soo saar dadku ay u qaataan alaabtooda si ay u qiimeeyaan, ka dibna u soo bandhigaan bandhigyo.
Qof walba wuu ogyahay Ankara inay tahay magaalada ay ku yaalliin shaqaalaha rayidka ah. Dowladdu waa halkaan; saraakiisha ayaa dabcan. Laakiin Ankara waa magaalo warshadeed aad u weyn. Tan lama yaqaan, lamana iftiimin. Tani waa magaalo ganacsi weyn, oo waxaa jira xitaa meelo badan oo laga faa'iideysan karo. Waxay ka faa iidaysan kartaa dalxiiska caafimaadka, waxay u baahan tahay in la horumariyo. Currently waxaa uu waxtarayaa laakiin waxay noqon lahayd wax badan ka dhaqso iyo ka weyn. Waxaan ka faa'iideysan karnaa dalxiiska iimaanka, dalxiiska kuleylka iyo dalxiiska dabiiciga. All lagu bixiyaa jawi meesha ay joogaan a Ankara yar ka weyn. Qof walba helo qayb ka mid ah pie ee deegaanka kordhaya yar oo dheeraad ah. "
Isaga oo tixraacaya qorshayaasha gaadiidka ee Ankara, ayuu yidhi Özhaseki, Im Waxaan xisaabiyay mashruuca ka dhasha ee la xiriira nidaamka tareenka. Shaqadeenna wadooyinka iyo nidaamyada tareenka waxay gaari doonaan 20 bilyan. Bilyanka '15 billion' waxay ku saabsan tahay nidaamyada tareenka. Haa, waxaan u keeni karnaa lacagtaan warshadaha Ankara waxaanan ku soo celin karnaa lacagtaan. Waxaan ka dhigi karnaa mid aad u deggan. Sababtoo ah marka ay jirto goob warshadeed oo leh karti noocan oo kale ah, maahan wax sax ah in dibadda loo baxo oo la helo qof oo loo tartamo si isku mid ah oo loogu hago hindisada.
Degmada, waad ka fikiri kartaa waxa la isticmaali doono, laga soo bilaabo kuraasta ilaa dambiisha qashinka, waxyaabaha laydhka ee shaqooyinka ugu fudud. Warshadahayada ayaa sameyn kara taas. Waxaan u bedeli karnaa dhaqaalahan qaab aad u raaxo badan. ” (OSTİM)
Madaxweynuhu wuxuu tijaabiyey Nidaamka Isgaadhsiinta
Qorshaha Master Plan Master Plan
Özhaseki, Kanal Istanbul waxay noqon doontaa dhismayaal aad u qurux badan
maalgelinta nidaamka tareenka
1915 Sanduuqa Xawaaladdaha 1 Sanadka Si Looga Buuxiyo Hore
Halkalı-Calaamadaha Gawaarida Geeska wuxuu bilaabay inuu rakibo!
Waa maxay Xadka Xadka Excise Dute Exemise ee Naafada ah?